Ciidamada Ammaanka Jubbaland oo howlgal ku qabtay Dad ay ku tuhmayaan Qarax ka dhacay Kismaayo | Allgalgaduud.Com
Home Dhacdooyinka Todobaadka Ciidamada Ammaanka Jubbaland oo howlgal ku qabtay Dad ay ku tuhmayaan Qarax...
Ciidamada Ammaanka Jubbaland oo howlgal ku qabtay Dad ay ku tuhmayaan Qarax ka dhacay Kismaayo
Wararka ka imaanaya Magaalada Kismaayo ee Xarunta KMG ah ee Dowlad Goboleedka Jubbaland waxa ay sheegayaan in saakay Ciidamada Maamulkaas ay sameeyeen howlgalo ay kusoo qabteen dad ay la xiriirinayaan Al-Shabaab.
Dad ku sugan Magaalada Kismaayo waxa ay Mustaqbal u sheegeen in Ciidamada ammaanka ay goob isugu geeyeen Dad u badan dhalinyaro oo ay kala soo baxeen xaafado kamid ah Xarunta Gobolka Jubada Hoose ee Kismaayo.
Ciidamada ayaa dhalinyarada la aaday mid kamid ah Xarumaha ay ku leeyihiin Magaalada Kismayao si ay baaris ugu sameeyaan, waxaana ay sii daayeen qaar kamid ah dadkii lagu qabtay howlgalka.
Baaritaanada iyo Howlgalka Ciidamada Ammaanka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa daba-socda Qarax xalay ka dhacay Goob ganacsi oo ku taalla Isgoyska Golol oo u dhaw aargada Magaalada Kismaayo.
Qaraxaas waxaa ku dhintay labo ruux, halka ay ku dhaawacmeen dhowr iyo toban kale oo la geeyay isbitaalka Magaalada Kismaayo oo xiligaan looga daweynayo dhaawacyadii soo gaaray sida ilo wareedyo ku sugan Kismaayo ay Mustaqbal u sheegeen.